Meghan Markle hụrụ iyi akpụkpọ ụkwụ Veja - ha na -erekwa ugbu a - Ụdị
Meghan Markle's Go-To Sneakers nwere 30% kwụsịrị ugbu a
Chekwaa ha mgbe ị nwere ike.
Chris Jackson, lee
Emelitere - Machị 16, 2021: Ozi ọma! Ndị akpụkpọ ụkwụ Esplar hụrụ n'anya nke Veja, akpụkpọ ụkwụ na -acha ọcha na -acha ọcha Meghan Markle na -eyi na -emegharị, ka akara ya ruo Machị 21 dị ka akụkụ nke akụkọ akụkọ Bandier. Enyi & ọrịre ezinụlọ . A na-erekarị ụdịrị agba ojii na-acha ọcha, mana ọ dị maka 30% gbanyụọ ugbu a, na-eme ya naanị $ 84 kama ịbụ $ 120 mbụ.
Ndị na -agba snịịka kacha elu (Veja Esplar) (Black)
$ 120 $ 84 Bandier Zụta ugbu a
A na-erekarị nha na ụdị B&W, mana anyị hụrụ ụzọ abụọ ọzọ nwere akara dị elu-Esplar na akpụkpọ anụ ọcha na suede ahịhịa na chunkier V-10 nlereanya n'ime uhie na navy -Worth na -agbakwunye na ụgbọ ibu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ụzọ dị ọnụ ala (ụzọ ọ bụla!) Mgbe ị nwere ike.
Hụ Espnea Low Top Sneakers (White)
$ 150 $ 105 Bandier Zụta ugbu a
Akụkọ ORIGINAL -March 21, 2019: Enweghị m ekele maka uru akpụkpọ ụkwụ dị mma ruo mgbe m gbara afọ 26. Tupu mgbe ahụ, ejegharịrị m New York City naanị na akpụkpọ ụkwụ Chelsea nwere ogologo ụkwụ. N'oge na -adịghị anya, enwere m ọkpụkpụ gbajiri agbaji n'ụkwụ m, dọkịta m wee taa ụta akpụkpọ ụkwụ m ụta. Na -atụgharị na ị kwesịrị ịgbanwe akpụkpọ ụkwụ gị ọtụtụ oge. Mmụta mụtara: Achọrọ m ịchọta otu akpụkpọ ụkwụ dị mma ma dị mma m ga -eyi kama.
N'ọchọ m maka ụzọ zuru oke, m nwalere ọtụtụ ụdị ewu ewu, dị ka Akpụkpọ ụkwụ Adidas Superstar na nke Nike cortez . Ha nwere akụkụ 'buliri elu' site na iji obere ihe mgbochi agba, mana ha ebilighị n'ezie ka oge na-aga. (M na -aga a otutu. ) Ọ dị m mkpa ịzụta ụzọ ọhụrụ kwa ọnwa atọ ma ọ bụ anọ, nke bụ ihe mgbakasị ahụ maka akpa m (ịghara ịkọ maka egwu gburugburu). N'ihi ya amalitere m nyocha ụdị ndị nwere ike na -adigide. Ọ bụ mgbe ahụ ka m hụrụ Lee , ụdị akpụkpọ ụkwụ ụkpụrụ ọma nke mepụtara òtù nzuzo na -eso.
Ndị na -eme ihe nkiri (dị ka Emma Watson na Emily Ratajkowski) na ndị na -eme ihe nkiri (dị ka Jacey Duprie nke Damsel na Dior) na -eme egwuregwu. otu obere sneakers na Instagram na -enweghị ịpị 'ịzụrụ'. Kedu ihe mechara kwenye ịzụta nke m? Ọmarịcha Veja eze. Mgbe m hụrụ Meghan Markle ka ọ na -agbaji akpụkpọ ụkwụ Veja ya n'oge njem nlegharị anya ya nke Australia mụ na Prince Harry, ekpebiri m kwesịrị nwee ha na ndụ m.
Harry na Meghan nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Sydney n'oge ụbọchị abụọ n'ime egwuregwu Invictus dị na Sydney, Australia. Chris Jackson
Ana m akwado ya mgbe niile Ụdị azụ azụ Markle ma nwee mmasị n'otú o si eji ntụpọ aka ya akwalite ụdị obere enyi na enyi. Ọ na -eyi Vejas ya na uwe ojii ojii na -enweghị isi, na -ele anya nke ukwuu karịa ka m na -eme mgbe m tụgharịrị n'okporo ụzọ iji nweta kọfị m na ngwụsị izu. Ọ bụrụ ndị sneakers a dị mma maka duchess, echere m, mgbe ahụ ha zuru oke maka m. N'ụzọ dị mwute, ndị ọzọ nọ n'ụwa chere otu ahụ. Eresịrị ụdị akpụkpọ ụkwụ m chọrọ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile m lere anya-ma n'ụlọ ahịa ma n'ịntanetị.
Na-aga n'ihu n'izu ole na ole. Mgbe m nyochachara na nyocha, akụri m jackpot mgbe m hụrụ na ha na -ebugharị na nha m na Nordstrom . Ahọrọ m nke See Ụdị Esplar maka ntakịrị atụmatụ oji na ọcha wee nye ha iwu ozugbo. Maka na ha dị nfe, ha na -eji ihe niile site na uwe ogologo na -asọ asọ ruo jeans na blazer. Ọ dịtụghị mgbe m na-eche ugboro abụọ banyere iyi ha ka ha rụọ ọrụ, ọbụlagodi n'ọfịs ejiji na-aga n'ihu Ọmarịcha ọ.
Lelee na Instagram
esi eji ngwaahịa nkịtị
Ọ bụghị naanị nke ahụ hụ akpụkpọ ụkwụ na -ntụsara ahụ na vasatail. Ọ ga -adị m mma iyi ha ebe m maara na e mere ha nke ọma, nke a na -enweghị ike ikwu maka ndị sneakers niile. Veja na-enweta owu ozugbo site na mkpakọrịta ndị ọrụ ugbo mara mma na Brazil na Peru, ebe a na-eji akpụkpọ anụ tilapia fọdụụrụ n'ugbo.
My Vejas nwere naanị otu obere mgbada: Ọ were obere uwe mwụda iji dọba ha. (NDỤMỌDỤ: Ejila ụkwụ efu pụta n'ime igbe ahụ.) Agbanyeghị, mbọ a rụpụtara. Ụbọchị ndị a ọ dị m ka m na -eje ije n'igwe ojii. Ike anaghị agwụcha ụkwụ m, ọbụlagodi mgbe m na -agagharị n'obodo maka nrịgo 20K ma ọ bụ karịa. Ihe niile ije ahụ emebeghị ka ọkụ ha belata. Site n'enyemaka nke a Eraser Ime Anwansi , Vejas m na-anọ na-enweghị ntụpọ-nke zuru oke maka snob dị ọcha dị ka m.
Ekele dịrị Duchess Meghan Markle, ejikọtara m na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ zuru oke. Ọ meela naanị izu isii ma amalitela m iti mkpu banyere ịhụnanya m nwere maka Veja site n'elu ụlọ. (Ma site na Instagram m, n'ezie.)
Hụ ndị Sneakers Esplar
$ 120 Nordstrom Zụta ugbu a
Michaela O'Shaughnessy bụ onye bụbu onye njikwa mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na Ọmarịcha. Soro ya @lifeofaladybear .
wepu ntu mikpuru n'ime ulo
onyonyo nke edozi isi ojii dị mkpụmkpụ
ude mmiri kacha mma maka akpụkpọ anụ ọkụkọ
ka esi atọpu olu